३० बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण प्रक्रियामा, को कससँग मिल्दैछन् ? « Sansar News
३० बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण प्रक्रियामा, को कससँग मिल्दैछन् ?
२५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १०:३५
२५ फागुन, काठमाडौं । अहिले ३० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकीकरण प्रक्रियामा छन् । पुँजी वृद्धि र सहुलियतको माध्यमबाट संख्या घटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अनुसार पछिल्लो समय मात्रै सो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका हुन् । यी संस्थाहरुमा अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छन् ।
वाणिज्य बैंकमध्ये यतिबेला सिटिजन्स बैंक यो प्रक्रियामा छ । सिटिजन्स बैंकले तिनाउ मिसन तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र सिर्जना फाइनान्सलाई आफूमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ । दुवै संस्थासँग बैंकले छुट्टाछुट्टै रुपमा समझदारी गरिसकेको छ । तिनाउ मिसन लुम्बिनी प्रदेशको विकास बैंक हो भने सिर्जना फाइनान्स प्रदेश १ को फाइनान्स कम्पनी हो ।
सिटिजन्स बैंकसँग मर्जरमा जान लागेको तिनाउ मिसन बाहेक विकास बैंक अन्तर्गत थप २ वटा विकास बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् । गरिमा विकास बैंक र सहारा विकास बैंक एक आपसमा गाभिन लागेका हुन् । राष्ट्रिय स्तरको गरिमाले प्रदेश २ को सहारा विकास बैंकलाई गाभ्न ५ महिना अघि नै समझदारी भएको थियो ।
फाइनान्स कम्पनी अन्तर्गत सिटिजन्स बैंकसँग मर्जर हुन लागेको सिर्जना फाइनान्स बाहेक नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्स मर्जरको प्रक्रियामा छन् । नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई गाभ्न लागेको हो । यसप्रकार ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका विकास बैंकमध्ये यतिबेला ७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ३ वटा बन्ने अवस्था छ ।
उता लघुवित्ततर्फ भने मर्जरको लहर तीव्र छ । अस्तित्वमा रहेका ७६ वित्तीय संस्थामध्ये अहिले २३ लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरको प्रक्रियामा छन् । ती संस्था मिलेर ११ वटा वित्तीय संस्था बन्नेछन् ।
लघुवित्त संस्थामध्ये यतिबेला इन्फिनिटी लघुवित्तले नेपाल एग्रो लघुवित्तलाई गाभ्दैछ । त्यस्तै, नेशनल माइक्रोफाइनान्सले महिला सहयात्री वित्तीय संस्थालाई पनि एक्वायर गर्ने समझदारी गरेको छ ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्तले भने अहिले बीपीडब्ल्यु लघुवित्त र देउराली लघुवित्तलाई आफूमा गाभ्ने समझदारी गरेको छ । सीवाईसी लघुवित्त र शालिग्राम लघुवित्तसँगको मर्जर असफल भएपछि आरम्भ चौतारीले अरु २ संस्थालाई प्रक्रियामा सामेल गरेको हो ।
त्यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तले नाडेप लघुवित्तलाई आफूमा गाभ्दैछ भने स्वदेशी लघुवित्त र एनआईशी एशिया लघुवित्तबीच मर्जर हुँदैछ । मर्जरपश्चात् लघुवित्तको नाम स्वदेशी नै रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, समाज लघुवित्त र स्वस्तिक लघुवित्तबीच पनि मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्दैछ । मर्जरपछि यो संस्थाको नाम स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था नै रहनेछ । उता समता र घरेलु लघुवित्तको मर्जरपछि भने दुवै संस्थाको अस्तित्व नमेटिनेगरी नामाकरण गर्ने सहमति भएको छ । दुई संस्था एक भएपछि समता घरेलु लघुवित्त संस्था नामबाट कारोबार हुनेछ ।
यसबाहेक मिर्मिरे लुघवित्त वित्तीय संस्थाले सिर्जनशील लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आफुमा गाभ्दैछ । यसअघि मिर्मिरेले स्वेडा लघुवित्तलाई प्राप्ति गरिसेको छ । त्यस्तै, विजय लघुवित्तले खप्तड लघुवित्तलाई तथा ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले स्पर्श लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न समझदारी गरिसकेको छ । घोडाघोडी लघुवित्त र युनिक लघुवित्तबीच भने मर्जरको सहमति भएको छ । मर्जरपछि संस्थाको नाम भने घोडाघोडी लघुवित्त नै रहनेछ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ वटा वाणिज्य बैंक, १९ वटा विकास बैंक, २० वटा फाइनान्स कम्पनी, ७६ वटा लघुवित्त र एउटा पूर्वाधार बैंकलाई लाइसेन्स दिएको छ ।अहिलेसम्म भएको मर्जर प्रक्रिया समाप्त हुँदा २७ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी र ६४ वटा लघुवित्त संस्था र एउटा पूर्वाधार बैंक बाँकी रहनेछन् ।
माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा हलेसी मन्दिरलाई भक्तजन गन्ने मेसिन प्रदान
आज डलरको भाउ बढ्यो, यस्तो छ अन्य विदेशी…